Sabaata - NuuralHudaa
Sufyaan ibnu Abdullaah Rabbi irraa haa jaalatuu “Yaa Rasuulallaah, Islaama keeysatti waaniin si malee nama biraa hin gaafanne naaf himi.” Je’ee Rasuula gaafate. Rasuulli ﷺ “Rabbitti amane je’i, eegasii irra gad dhaabbadhu (sabadhu)” Je’een. Sahiih Muslim
Guddoon dhaamsa kanaa:
Dura Rabbitti amanuudha. San booda ammoo irratti gad dhaabbachuudha.
Irra gad dhaabbachuun ykn irratti sabachuun waan lamaan ibsama.
Karaa Rabbiin itti ajaje qabatanii sanirratti deemuudha.
Karaa kanarra turuudha hanga duuti dhuftutti.
Karaa Rabbii fi Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam itti nu ajajanirra turuuf wanni nuti guuttachuu qabnu ikhlaasa. Ikhlaasa jechuun Rabbi qofa gabbaru, Rabbi qofaaf ibaadaa dalagu, Rabbi qofaaf jecha hamtuu inni irraa dhorge dhiisuudha.
Nabiyyii sallallaahu aleeyhi wasallam jala deemuu: Ibaadaan Rabbiif jecha dalagan hundi karaa Rasuulli ﷺ dalage irratti tahuu qabdi. Waan Rasuulli ﷺ itti ajaje, akka inni ajajetti, akka inni dalagetti dalaguufi waan inni irraa dhorgerraa dhorgamuudha, sun jaalalaa Rasuulaaf qabnu mirkaneeysa. Niin jaaladha jechaa faallaa jaalallee dalaguun waan hin malle.
Waan Rabbiin dirqama godhe dalaguufi waan haraamaa dhiisuu. Ibaadaa irratti gad dhaabbachuufi irratti sabachuuf hamtuu hunda irraa fagaatuufi dirqamoota hunda dalaguutu barbaachisa.
Ilmii ykn beekkumsa qabaachuun ibaadarratti gad dhaabbachuuf murteeysadha. Rabbiin Nabiyyii isaa ﷺ beekkumsa naaf dabali je’ii na khadhu je’ee isa ajaje. Nabiyyii tahuu wajjiin wanni dabaltii akka inni kadhatu ajajame beekkumsa qofa.
Zikritti jajjabaachuun waan sabaatarra nama tursiisurraa takka. Arrabaan hoggaa hunda zikrii guddisuun qalbii gad dhaaba, gammachuufi ziqiitu argama.
Rasuulli ﷺ akki je’e “Iimaanni gabrichaa hin sabatu waan qalbiin isaa hin sabatiniin, qalbiin isaatis hin sabattu hanga arrabni isaa sabatuu (zikriidhaan)” Musnad imaam Ahmad
Namni Zikriin if shaakale, shaakala biraa kan baditti isa kaasurraa qulqullaawe.
Rabbiin iimaanarratti gad dhaabbachuu nuuf haa kennu.
Qalbiifi arraba keenya nu haa sabachiisu.
October 18, 2021 sa;aa 3:51 pm Update tahe
July 18, 0035 sa;aa 1:34 pm Update tahe